बालबालिकालाई दण्ड सजायः पहिला दिन्थें, अब दिन्नँ - Shikshak Maasik
बालबालिकालाई दण्ड सजायः पहिला दिन्थें, अब दिन्नँ
by • • दण्डरहित सिकाइः अनुभव र विकल्प • Comments (0) • 440
– तिलकबहादुर कुमाल
घरपरिवार, विद्यालय, सार्वजनिक ठाउँ, समाज र उद्योग कलकारखाना आदिमा बालबालिकामाथि शारीरिक, मानसिक, भौतिक दण्ड–सजाय दिने गरेको पाइन्छ । जस्तैः १. बन्धनमा राख्नु, २. श्रम गराउनु, ३. बोल्नमा बन्देज गर्नु, ४. खेल्न नदिनु, ५. पोषण, लालन–पालनमा बेवास्ता गर्नु र ६. घरायसी काम, श्रम र उद्योगमा कामदार बनाउनु आदि । पहिला–पहिला बालबच्चालाई दण्ड–सजाय दिनु प्रायः सामान्य र स्वीकार्य ठानिन्थ्यो, हेपिन्थ्यो, दबाइन्थ्यो । बालरुचि, चाहनालाई बेवास्ता त हुन्थ्यो नै, बालअधिकार उल्लंघन भएको पक्षलाई ध्यान नदिने प्रचलन पनि थियो । यस्तो चलन अझै पनि कतिपय ठाउँमा यथावतै छ ।
दिवास्वप्न र तोत्तो–चान पढेपछि…
बालबालिकाको वृद्धि र विकासमा आमाबाबु, शिक्षक र समाजको महŒवपूर्ण भूमिका रहन्छ । म आफू स्वयं विद्यार्थी एवं अभिभावक पनि हुँ । उच्च शिक्षा हासिल गर्ने उद्देश्यले काठमाडौं आएँ । अध्ययनको सिलसिलामा शैक्षिक मनोविज्ञान, बालविकास र बालमनोविज्ञानबारे पाठ्यक्रममा समावेश भएको हुनाले पढ्नुपथ्र्यो । सो सम्बन्धी पुस्तक तथा पत्रपत्रिकाको खोजीमा थिएँ म । एक जना मित्रले शिक्षक मासिक पढ्न सुझव दिए । मैले भोलिपल्टै शिक्षक पत्रिका किनेर पढें र शिक्षा संकाय पढ्ने विद्यार्थीका निम्ति यो निकै उपयोगी रहेको पाएँ । त्यसपछिदेखि त म शिक्षक मासिकको नियमित पाठक नै बन्न पुगें । शिक्षक मासिकबाटै प्रकाशित ‘दिवास्वप्न’ र ‘तोत्तो–चान’ पुस्तक पढ्ने अवसर पनि मिल्यो । ती पुस्तक पढ्दै गर्दा आफ्नो बाल्यवस्थामा बुवाआमाका क्रियाकलाप सम्झ्ँदै अहिलेका बालबच्चा र विद्यार्थीको अवस्था तुलना गर्दै गएँ । दुईवटै पुस्तक पढिसकेपछि अन्ततः बालबच्चालाई दण्ड–सजाय दिंदा पर्ने नकारात्मक प्रभावको बोध राम्ररी भयो; दण्ड–सजाय दिनुहुँदैन भन्ने कुरामा भित्रैदेखि ‘कन्भिन्स्ड’ भएँ । त्यसभन्दा पहिला भाइबहिनी, बालबच्चालाई पढाउँदा र कुनै कुरा सिकाउँदा, अभ्यास गराउँदा म पिट्ने, तर्साउने गर्दथें ।
तर, शिक्षक मासिक र दिवास्वप्न, तोत्तो–चान पुस्तक पढ्न थालेपछि मैले बालबालिकालाई दण्ड–सजाय दिएको छैन । त्यसबाहेक, मेरो गाउँको विद्यालयका प्रअ, शिक्षक, विद्यालय व्यवस्थापन समिति र अभिभावकलाई बालबालिकालाई दण्ड–सजाय होइन, बालमैत्री शिक्षा दिएर हुर्काउनु र पढाउनुपर्छ भनेर अभिभावक भेलामा भन्न पनि थालेको छु । ती किताब र पत्रिका पढ्न पनि सुझव÷सल्लाह दिने गर्छु । कतिपय शिक्षक, अभिभावकले मेरो सुझव÷सल्लाह अनुसार शिक्षक पत्रिका र ती पुस्तक किनेर पढ्न पनि थालेका छन् । शायद त्यस्तै कुराले गर्दा होला हिजोआज विव्यसको बैठक र अभिभावक भेला हुँदा मलाई पनि बोलाउने गर्नुहुन्छ । म उहाँहरूको निम्तालाई स्वीकार गरेर काठमाडौंदेखि गाउँको विद्यालयमा बेला–बेलामा जाने गर्छु ।
बाल्यकाल भनेको खेल्ने, सिक्ने, जिद्दी गर्ने, जिज्ञासु एवं उत्सुकताको उमेर हो भने शारीरिक हिसाबले तीव्र वृद्धि र विकासको समय पनि हो । उनीहरूमा बोध, तर्क, चिन्तन र विश्लेषण गर्ने क्षमता अति कम र विकासोन्मुख अवस्थामा रहेको हुन्छ । यस्तो अवस्थामा देखेर, सुनेर, नक्कल गरेर, भोगेर सिकाइ सिक्छन् । यसर्थ बालबालिकालाई वयस्कानुकूल चाहनामा बदल्ने आकांक्षाले दबाब र बन्धनमा राख्नुहुँदैन । बरू बालबालिकाको सामाजिकीकरण र व्यक्तित्व विकासमा सहयोग पु¥याउन प्रेरणा दिएर तथा प्रशंसा गरी ऊर्जा र आत्मबल बढाउनुपर्छ । बालबच्चालाई दण्ड सजाय नदिई निम्न विधि र उपाय अवलम्बन गरी हुर्काउन सकिन्छ ः
बाबुआमाबीच राम्र्रो सम्बन्ध नभएका बालबालिकाले सामाजिक समायोजनामा थप चुनौती व्यहोर्नुपर्छ । परिवारमा झ्गडा र तनावमा हुर्किएका बालबालिकाले आफ्नो बालापन राम्ररी भोग्न नै पाउँदैनन् । बालबालिकालाई दण्ड–सजाय दिंदा बाल–वयस्क सम्बन्धमा प्रतिकूलता आउँछ भने विद्यालयमा शिक्षक–विद्यार्थीबीचको सम्बन्ध राम्रो हुँदैन । शिक्षक–विद्यार्थीको समधुर सम्बन्ध नहुँदा सिकाइ र नतिजा खस्किंदै जान्छ । सजायकै कारण अभिभावकप्रति बालबालिका आक्रान्त हुन्छन् भने उनीहरूले पछि गएर आफ्ना सन्तानलाई पनि कुटपिट गर्छन् । दण्ड–सजायले बालबालिकामा भावनात्मक, संवेगात्मक, असन्तुलन र मनोवैज्ञानिक असर पर्ने हुँदा तार्किक, स्मरण, बोध, विश्लेषण क्षमतामा ह्रास आउने सम्भावना पनि उत्तिकै हुन्छ ।
प्रथम पाठशाला घरपरिवार नै हो । अझ् संयुक्त परिवारमा हुर्किन पाएका बालबालिका अरूभन्दा भाग्यमानी हुन् किनभने तिनले विविध उमेर समूहका सदस्यसँग घुलमिल र अन्तरक्रिया गर्न पाउँछन् । साथै तिनले हर्ष, दुःख, खुशी, सुखको बोध र चिन्ता व्यक्त गर्ने शैली र सीप अरूभन्दा बढी सिक्छन् । तर वर्तमान समयमा एकल परिवारको बाहुल्य भएकोले र आमाबाबु आय–आर्जनमा जुट्ने भएकोले बालबालिकाले हिजोजस्तो संयुक्त परिवारजस्तो पर्यावरण पाउँदैनन् । शहरी क्षेत्रमा त मातृ÷पितृवात्सल्य निकै कमले मात्र पाउँछन् । बाल खेल खेलाउन त परैको कुरा भयो, खेल्ने ठाउँ समेत हुँदैन । शिशुकालदेखि नै बालगृह, हेरचाह केन्द्र र पूर्व प्राविलाई सुम्पिन्न चाहन्छन् । एकल परिवारका बालबालिकाको सामाजिकीकरण प्रक्रियामा हार्दिकता र स्वाभाविकता कम, यान्त्रिकता र एकोहोरोपना बढी हुन सक्छ ।